जातीय कट्टरता एउटा दम्भ – मझेरी डट कम
“पुनमले विवाह गरिछिन्, हैन आन्टी ?” मैले यति मात्र सोधेकी थिएँ, आन्टीको अनुहारको रङ्ग एकाएक फेरियो ।
‘हो नै भन्नुपर्‍यो, हेर न, कति राम्रा राम्रा र उच्च पदका केटाहरू हेर्न आएका थिए, त्यसले बुद्धि बिगारी ।’ उनी उदास थिइन् ।
‘अनि आˆनै कास्ट ?’ मलाई थाहा थियो पुनमले कोसँग विवाह गरी र पनि मैले खोतलेँ, खोतल्नु पर्ने कारण थियो ।
‘इन्टरकास्ट हो ।’ उनले यत्ति मात्र भनिन् । छोरीले विवाह गरेको केटाको जात उनले खोलिनन् ।
नेपालीमा एउटा उखान छ, अरूलाई पर्दा सस्तो, आफूलाई पर्दा कस्तो ?’ अधिकांश मानिसमा आˆनो आङको भैँसी नदेख्ने, अरूको आङको जुम्रा केलाउने प्रवृत्ति छ । केही महिनाअघि मात्र यिनै आन्टीले मेरी एउटी साथीले प्रेम विवाह गरेकोमा भनेकी थिइन्, ” तिम्री साथी त पोइल गइछिन् होइन ?” यो उनको भाषा थियो । विशुद्ध नेपाली झर्रो भाषा । जसमा कुनै शिष्टता थिएन । एउटा उपेक्षा थियो, एउटा व्यङ्ग्य । मानौँ उसले प्रेम विवाह गरेर ठूलो अपराध गरी ।
“हो, गरिछे आन्टी” मैले सत्यको पुष्टि गरेको थिएँ । यथार्थमा भएको साँचो कुरो ढाँट्न सकिएला तर प्रमाणित गर्न सकिँदैन ।
“हेर, बाहुनकी छोरी भएर क्षेत्रीसँग पो गएर मरिछिन्”, उनले फेरि थपिन् । भाषा उही । घरमा लाइस्योस्, खाइस्योस् भनेर मात्र मान्छे कहाँ सभ्य हुन्छ र ?
“हो, उसलाई त्यही केटा मन पर्‍यो, गरी । तपाईं हामीलाई केको टाउको दुखाइ ? उसलाई हामीले पाल्ने होइन क्यारे । उसकै लोग्नेले पाल्ने हो ।” म सहज हुन फिसिक्क हाँसेँ । मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि उनलाई थाहै थिएन ।
“हेर, सबै बाहुन केटा मरेछन् ? बाबुआमालाई टेन्सन । यस्ता सन्तान हुनु भन्दा त बरू गर्भमा नै तुहुनु बेस ।” उनले फेरि थपिन् । उनको चासो अझ बढ्यो ।
“जोसँग मन मिल्छ, त्यहीसँग विवाह गर्ने हो आन्टी, उसको क्षेत्री केटासँग नै मन मिल्यो विवाह गरी । उनीहरूको दाम्पत्य जीवन सुखद होस्, सकिहाल्यो नि”, मैलै कुराको बिट मार्न खोजेको थिएँ ।
“भन्छ्यौ नि, जात भनेको जात हो । तिम्रो पनि त्यस्तै परेको छ कि क्या हो ?” अनाहक च्याँठ्ठिएकी थिइन् उनी ।
“हुन पनि सक्छ । तपाईंकी पनि तीन छोरी छिन्, भविष्यको के ग्यारेन्टी र ? उनीहरूले पनि त्यसरी नै ‘इन्टरकास्ट’ बिहे गरे भने नि, के आत्महत्या गर्नुहुन्छ ?” म पनि अलिक खरी भएकी थिएँ ।
“हाम्री छोरीहरू अरू जस्तो बाइफाले होइनन् । त्यसरी चरा उडे जस्तो भुर्र उड्दैनन् । कुल घरानाको इज्जत राख्छन् । हामी त्यसै पनि ब्राहृमण परिवारका उच्च जातका ।” उनी भित्रको अहम् बढेको हेरी नसक्नु थियो ।
“‘त्यो भयो भने त ठीकै हो आन्टी तर पनि आजकलको जमानामा जातीय कट्टरता राम्रो होइन ।” उनीसँग तर्क वितर्क गर्नु बेकार लागे पनि यति भनिदिएर म उनीसँग छुट्टएिकी थिएँ ।
3 thoughts on “जातीय कट्टरता एउटा दम्भ”
अतिथि January 31, 2013 at 12:45 pm
Pir parnu vaen ni,sabda 6not kami vo sathai ……………….
u ko kathako angs……
अतिथि January 31, 2013 at 12:55 pm
अतिथि January 31, 2013 at 1:02 pm
nakhane jat,khane jat hunna sabai jatika manisle khan6n kasailai naruchnu,jyanale nasahanu napachnu beglai kura ani arko kura paudi khele gari piuna,khan kasko rupiya khora…………………………………?